Barnaamijka Helitaanka Raasamaal ee Ganacsiga Yaryar - Office of Economic Development | seattle.gov
Barnaamijka Helitaanka Raasamaal ee Ganacsiga Yaryar
Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha Seattle waxa uu bixinayaa $8 milyan si uu u taageero ganacsiyada yaryar ee uu saameeyay COVID-19 iyada oo la maalgalinayo kharashaadka ganacsiga. Ganacsiyada yaryar waxay amaahan karaan ilaa $150,000 oo leh 4% dulsaarka kharashyada sida mushahar bixinta, adeegyada, kirada iyo kharashyada kale ee ganacsiga. Maalgelinta magaalada waxay ka dhigi doontaa deymo dabacsan 25% la cafin karo ganacsiyada yaryar ee xaqa u leh.
Si aad u codsato Barnaamijka Helitaanka, ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin inay ku soo gudbiyaan codsiga amaahda Maalgelinta Ganacsiga Yaryar onlayn ee smallbusinessflexfund.org/seattle. Fasiraadda ama caawinta, fadlan kala xidhiidh Business Impact NW lambarkooda waa (206) 339-6588.
Codsigu waxa uu furmayaa 8-da Maarj waxa uuna xidhmayaa 8-da Abriil 5-ta galabnimo.
Si aad ugu qalanto maalgelinta Magaalada, ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin:
Inay noqdaan ganacsi yar oo faa'iido doon ah oo ku yaala xadka magaalada Seattle.
Inay la kulmeen saameyn dhaqaale oo toos ah COVID-19 dartii.
La kulan ugu yaraan laba ka mid ah saddexda arrimood ee soo socda:
o In aan ka badnayn $5 milyan dakhli sanadeedka 2019 ama 2020.
o In aan ka badnayn 50 shaqaale waqti-buuxa ah oo u dhigma.
o Wax ka badan laba goobood.
Codsiga Maalgelinta Ganacsiga Yaryar
Ka codso smallbusinessflexfund.org/seattle.
Ma qabtaa wax su'aalo ah ama u baahan tahay gargaar?
Fadlan wac Business Impact NW (206) 339-6588.
Caawinta macluumaadka iyo codsiga waxaa lagu heli karaa luqado badan, oo ay ku jiraan Amxaari, Shiine, Kuuriyaan, Soomaali, Isbaanish, Thai iyo Fiyatnaamiis.
Kulamada macluumaadka khadka ah
Kulamadan macluumaadka ah ayaa sharxi doona barnaamijka iyo faahfaahinta deynta iyadoo la siinayo wakhti su'aalo lagu weydiinayo. Fadlan iska diwaangeli laba toddobaad ka hor si aad u hesho taageerada tarjumaada.
Maarso 3, 2:30-3:30 galabnimo. Kulamadaan waxa lagu heli karaa Ingiriisi iyo Isbaanish. Si aad isu diwaangeliso, fadlan booqo isku xidhka diiwaangelinta internetka.
Maarso 17, 2:30-3:30 galabnimo. Si aad isu diwaangeliso, fadlan booqo isku xidhka diiwaangelinta internetka.
Maarso 28, 2:30-3:30 galabnimo. Si aad isu diwaangeliso, fadlan booqo isku xidhka diiwaangelinta internetka.
Maxaa dhacaya haddii aanan u qalmin deyntaan?
Xafiiska horumarinta dhaqaalaha waxa uu ku dhiiri galinayaa dhamaan codsadayaasha buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka ee kor ku xusan in ay codsadaan.
Amaah bixiyayaasha bulshadu waxay leeyihiin dabacsanaan dheeraad ah oo ku saabsan qiimaynta codsiyada amaahda. Haddii ganacsigaaga yar uusan u qalmin deyn, waxaa si toos ah laguugu xiri doonaa mid ka mid ah bixiyeyaasha kaalmada farsamada ee barnaamijka si loo go'aamiyo haddii aad u qalanto doorashooyinka maalgelinta dheeraadka ah ee magaalada.
Waa ayo bixiyayaasha bulshada?
Goormaan ogaan doonaa haddii aan u qalmo maalgelintan?
Amaah bixiyayaasha bulshadu waxay isla markiiba qiimayn doonaan codsiyada amaahda ee Sanduuqa Flex waxayna si toos ah u ogeysiin doonaan ganacsiyada yaryar heerka codsigooda marka la helo.
Dhammaan ganacsiyada yaryar ee xaqa u leh ee soo gudbiya arjigooda Flex Fund ka hor dhammaadka Abriil 8 waxaa loo tixgelin doonaa marka hore taageerada maalgelinta ee magaalada taasoo ka dhigi doonta deyntooda qayb la cafin karo.
Si aad u hesho warar cusub oo ku saabsan barnaamijka magaalada, fadlan isdiiwaangeli warsidahayaga ama nagu raac warbaahinta bulshada: @SeattleEconomy Twitter, Instagram iyo Facebook.
Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha ee Seattle waxaa ka go'an inuu dhiso dhaqaale loo wada siman yahay kaas oo faa'ido u leh magaalada oo dhan isagoo kor u qaadaya helitaanka fursadaha dhaqaale ee dhammaan bulshooyinka kala duwan ee Seattle. Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha Seattle waxaa ka go'an inuu dhiso dhaqaale loo siman yahay oo loo wada dhan yahay kaasoo faa'iido u leh magaalada oo dhan isagoo kor u qaadaya fursadaha dhaqaale ee dhammaan bulshooyinka kala duwan ee Seattle. Kooxda Awood u yeelashada Ganacsiga waxay bixisaa maalgelin iyo kaalmo farsamo taas oo ka dhigaysa mid la awoodi karo ganacsiyada yaryar si ay u bilaabaan oo ugu koraan bulshadooda.
Magaalada Seattle waxay ku dhiirigelinaysaa qof walba inuu ka qaybqaato barnaamijyadeeda iyo waxqabadyada. Su'aalo dheeraad ah, tarjumaad dhinaca qoraalka ah ama tarjumaad dhinaca afka ah, caawimo farsamo, hoyga naafada, agabka qaabab kale ah ama macluumaadka la heli karo, fadlan kala xidhiidh Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha (206) 684-8090 ama oed@seattle.gov.